Soo bandhigida Tadashi Yanai, ninka ugu qanisan Japan iyo aasaasaha Uniqlo - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Soo bandhigida Tadashi Yanai, ninka ugu qanisan Japan iyo aasaasaha Uniqlo
Tadashi Yanai ayaa dukaankeedii ugu horeeyay ee dukaanka Uniqlo furay 1984. MARTIN BUREAU / AFP / Getty Images
Tadashi Yanai waa qofka ugu taajirsan Japan. Ganacsade ayaa lahaan lahaa a hantida lagu qiimeeyo bilyan doolar (oo ku saabsan 22,1 bilyan euros), sida laga soo xigtay Bloomberg. Lacagtaas waxay ka timaadaa mawqifka Madaxwayne iyo Maamulaha Hantidhawrka Fast Retailing, ugu weyn ee dukaanka dharka ee Asia iyo shirkadda waalidkaUniqlo. Tadashi Yanai wuxuu furay dukaanka ugu horreeya ee Uniqlo ee 1984 waxaana uu kordhiyay astaanta calaamadaha 2 000 ee ugu yaraan dalalka 20 ee adduunka oo dhan.
Dharka Uniqlo waa "ku habboon dhammaan noocyada dadka : haddii ay yihiin bilyaneeriyo, fasal dhexe ama fasal caan ah, "ayuu yiri Tadashi Yanai oo ah majaladda Vault ee 2011. "Waa inaan la kulannaa rajada qof walba, sida Marks & Spencer, Gap ama H & M iyo Zara. Haddii aynaan daboolin qayb kasta oo nolosha ah iyo nooc kasta oo macaamiil ah, marnaba ma noqon doono barwaaqo. "
Le billionaire Japan wuxuu ku nool yahay guri ku yaal 50 Million Dollar (44,6 Million) oo ku yaala meel ka baxsan Tokyo waxana uu leeyahay guri kale oo ka mid ah qaybta magaalada. Waxa kale oo uu leeyahay laba koorsooyin golf oo ku yaala Hawaii, halkaas oo uu tago dhowr wiig kasta xagaaga, sida laga soo xigtay Bloomberg.
Halkan fiiri nolosha qofka ugu taajirsan Japan:
Tadashi Yanai waa qofka ugu taajirsan Japan iyo madaxweynaha Fast Retailing.
Xawaarida Dheeraadka ah
Ganacsadaha Japan ayaa ku jira madaxa shirkadda Fast Retailing iyo hantidiisa oo lagu qiyaasay balaayiin doollar oo doollar ah, wuxuu ka horreeyay 24,8 bilyan doolar (6 bilyan euro) Takemitsu Takizaki, kii labaad ee ugu taajirsan Japansida uu sheegayo Bloomberg.
Tadashi Yanai hantidiisu waxay ka timaadaa madaxweynaha iyo saamilaha ugu wayn ee dukaamada dhaqaalaha, oo ah dukaanka dharka ee ugu weyn Asia. Sannad-sannadeedka da'yarta 70 waxay haysaa 46% saamiyada shirkadda.
Shirkada Dammaanadda ah waa shirkadda waalidka ee Uniqlo iyo noocyo kale, oo ay ku jiraan Theory, Comptoir des Cotonniers iyo J Brand.
Hagaajinta suuq-geynta ayaa leh kumanaan dukaamo oo adduunka ah waxaana lagu soo warramay in sanadkiiba ay tahay 16,9 bilyan oo dollar (15,1 bilyan euro) bishii August 2017, sida laga soo xigtay Bloomberg.
Tadashi Yanai wuxuu ku dhashay Koonfurta Japan ee 1949, waa wiilka iibka dharka.
Asahi Shimbun oo ku socda bogga Getty Images
Tadashi Yanai aabihiis ayaa leh dukaamo dhar ah oo loogu talagalay ragga loo yaqaan 'Men's Shop Ogori Shoji'. Dukaanku wuxuu ku yaal dabaqa dhulka ah, qoyskiina wuxuu ku noolaa dabaqa sare. Sanadihii 1970, shirkadu waxay lahayd dhowr goobood.
Ka dib markii uu ka qalin jebinayey 1971, Tadashi Yanai wuxuu bilaabay inuu iibiyo bakhaarka iyo alaabta jikada ee dukaanka Jusco, laakiin wuxuu istaagey sannad kadibna wuxuu bilaabay inuu shaqeeyo aabbihiis. .
Jaamacadda Waseda / Facebook
Tadashi Yanai wuxuu haystaa shahaadada dhaqaalaha iyo siyaasaddaJaamacadda Waseda.
Tadashi Yanai wuxuu sheegay inuusan aad u dhiirigelin inuu shaqeeyo.
Yamaguchi Haruyoshi / Corbis iyadoo la marayo Getty Images
"Anigu waxaan doortay inaanan shaqeynin nolosheydataasi waa waxa aan ka fikiray, "ayuu u sheegay ABS-CBN. "Aabahay ayaa i weydiiyay inaan shaqo ka helo Jusco. Sidaas awgeed nasiib ayaan helay shaqo. "
Waxa uu sheegay in uu ku biiray aabaha aabihiis sababtoo ah ma laheyn meel uu tago, laakiin wuxuu ku dhammeeyey helitaanka shaqadan madadaalo.
1984, Hiroshima, Tadashi Yanai waxay dhistay Unique Warehouse Warehouse, oo markii dambe noqotay Uniqlo.
Koichi Kamoshida / Xiriiriyaha
Dhowr sano ka dib, wuxuu bedelay magaca shirkadda dharka ee aabeha ah ee "Retailing Fast".
Shirkadda ayaa si dhaqso ah u korodhay sanadaha soo socda. 1996, Tadashi Yanai waxay ka badan tahay dukaamada 200 ee Japan.
Dukaanka Uniqlo ee Tokyo ee 2001. Kurita KAKU / Gamma-Rapho adoo isticmaalaya sawirada Getty Images
Joodeyaal dusha sare ee 15 dollars (12,90 euros) Uniqlo wuxuu ahaa badeecadda caanka ah ee ugu caansan. Mid ka mid ah afartan qofood ee Japanese waxay ku iibsatay mid ka mid ah 1998.
Bilyaneerka Japan, wuxuu guursaday labo carruur ah, wuxuu ku nool yahay guri 16 000 m² oo ku yaala meel ka baxsan Tokyo.
Hantida, oo ay ku jiraan boostada ilaalinta, wasiirada iyo qolka shaaha lagu qiyaasay ku dhawaad ​​50 Milyan Dollar (44,6 million) ee 2017. Tadashi Yanai ayaa dhulkan iibsaday xaraashka 78 Million (70 million) oo ku yaal 2001.
Tadashi Yanai ayaa sidoo kale leh guri - oo lagu qiimeeyo 74 M $ (66M €) - oo ku taal degmada Shibuya ee magaalada Tokyo.
Shibuya habeenkii. Sawirada Getty Images
Sida laga soo xigtay Japan Times, Shibuya waa degmo ka madax banaan Tokyo halkaas oo masuuliyiin badan oo ka tirsan dawladda iyo agaasimayaashu ay deggenaayeen. Ku noolaanshaha "waxaa calaamad u ah xaaladda," Yukiko Takano oo ka tirsan Sotheby ayaa u sheegay wargayska 2014 ee Japan.
Bilyaneerka ayaa noqon lahaa mid xiiso leh oo ku saabsan golf. xagaaga kasta oo uu kharash gareeya 3 toddobaad ee Hawaii, halkaas oo uu leeyahay koorsooyinka golf 2 in lagu soo iibsaday wadar ahaan $ 74,1 million (€ 66,1M).
Aragtida koorsada Golf ee Kapalua Plantation ee Hawaii. Sam Greenwood / Getty Images
Tadashi Yanai wuxuu soo iibsaday koorsada golfeynta beeraha ee Hawaii shirkadda Maui Land & cananaaska in 50 million (44,6 milyan) 2009, sida laga soo xigtay Bloomberg. In 2010, wuxuu soo iibsaday koorso kale golf, Kapalua Bay, si 24,1 million (€ 21,5 million).
Inta u dhaxaysa 2013 iyo 2018, fidinta shirkadda Tadashi Yanai in uu mudan yahay net ka kacay $ 15,5 billion (€ 13,8 billion) ilaa $ 24 billion (€ 21,4 billion).
Suuqa Retailing hadda waa iibiyaha saddexaad ee ugu weyn dunida oo dhanka dib markii H & M iyo Inditex, shirkadda waalidka ee Zara, sida laga soo xigtay MoneyWeek.
Maanta, Suuqa Retailing waxay ka badan tahay 2 000 Uniqlo dukaamada ugu yaraan dalalka 20 - ma tirinayaan noocyada kale ee kooxda.
Uniqlo - oo ah midka ugu guulaha badan ee Tufaaxa ah - waxay ka badan tahay 2 000 dukaanka adduunka oo dhanoo ay ku jiraan 825 ee Japan.
Kaliya 50 iyaga ka mid ah waa in Maraykanka iyo tirada ugu badan waxaa la kala firdhiyey in wadamada Asia, oo ay ku jiraan Japan, China, Hong Kong, South Korea iyo Filibiin.
Uniqlo waxaa loo yaqaan dharka aasaasiga ah ee la awoodi karo iyo waqtigeeda. 'Uniqlo isma isku dayin in ay raacdo isbeddelka', ayuu qoray wargayska Gillian B. White ee Atlantic.
"Waxyaabaha muhiimka ah ee uniqlo - sida surwaalka madowkabaha caanka ah ee caanka ah, maryo suufka ah - ayaa la heli karaa bisha bil kasta, sanadka ka dambeeya, "ayuu qoray Gillian B. White.
Tadashi Yanai ayaa sidaas yidhi Uniqlo dharka waa "ku habboon dhammaan noocyada dadka", Sida laga soo xigtay MoneyWeek.
Tadashi Yanai wuxuu caddeeyey inuu doonayo inuu ujoogo Soonaatiida inuu noqdo kan ugu weyn ee iibka dharka ee adduunka.
Tadashi Yanai had iyo jeer loo magacaabay H & M iyo Zara oo ah kuwa ugu muhiimsan ee Suuqa Retailing. Wuxuu u sheegay Forbes Asia in 2017 uu goolkaasi ahaa sidaas Dakhliga shirkadu wuxuu gaarsiisan yahay 29 bilyan doolar (25,9 bilyan euros) by 2020.
"Macluumaadka iyo hal-abuurka casriga ah ayaa go'aamin doona guusha," ayuu yiri Tadashi Yanai. "Iyo goobta juqraafi ah."
Intaa waxaa dheer in 2 000 badan ayaa ku dukaamaysan dunidaUniqlo waxay qorsheyneysaa in ay furto dukaamaheedii ugu horeeyay ee Hindiya, Vietnam, Danmark iyo Talyaaniga kadibna 2019.
Uniqlo wuxuu ahaa tii ugu horreysey ee lagu isticmaalo xogta sirta ah ee dukaankeeda si kor loogu qaado waayo-aragnimada wax-iibsiga ee macaamiisheeda.
Haweeney ayaa muujinaysa in sawirkeeda ay soo bandhigtay casriga casriga ah ee GU Style Studio ee Tokyo bishii Nofeembar 2018. Kyodo News via Getty Images
"Dukaamada qaarkood way leeyihiin Soodhaha UMood oo ku saleysan AI kuwaas oo bixiya macaamiisha kala duwan ee wax soo saarka iyo qiyaaso reaction in midabka iyo qaabka loo marayo neurotransmitters, "ayuu qoray Blake Morgan Forbes. "Iyada oo ku xiran tahay dareenka qof kasta, dukaanka ayaa markaa soo jeedinaya alaab. Macaamiishu xitaa uma baahna inay badiyaan badhanka; calaamadaha maskaxda waxay ku filan yihiin nidaamka si ay u ogaadaan waxa ay ka fikirayaan maqaal kasta. "
Sannadkii hore, Uniqlo waxay bilawday dukaamada Studio Styledukaamo khaas ah oo ay macaamiishu isku dayi karaan dhar iyo amarrada internetka loogu talagalay dhalashada dambe, sida laga soo xigtay Japan Times.
Labada wiil ee Tadashi Yanai ayaa ah labada xubnood ee guddida dhaqaalaha ee Fast Retailing.
Kazumi Yanai xaflad ka dhacday New York ee 2012. Jason Binn / WireImage
"Tani macnaheedu waa in maamulka shirkaddu ay shaqeyn doonto xataa xitaa maqnaanshaha," ayuu yiri Tadashi Yanai. iyaga oo ku dhawaaqay kobcintoodii bishii October 2018. "Laakiin taasi micnaheedu maahan inay maamulayaan shirkadda."
Wiilashii Tadashi Yanai, Kazumi Yanai iyo Koji Yanaiwaxay ahaayeen labada madaxweyne ee madax-dhaqameedka Fast Retailing ka hor inta aan loo gudbin Guddiga, sida laga soo xigtay Nikkei Asian Review.
In 2017, Tadashi Yanai sheegay Nikkei Asian Review ah in uu ka tago lahaa booskiisa sida CEO of iibinaya Fast at da'da 70 sano, laakiin weli noqon lahaa Madaxweynaha.
Tadashi Yanai lahaa 70 2019 sano ee February, waxaana uu ilaa iyo haatan sameeyey ma jirin war rasmi inuu ka tagi lahaa booskiisa sida Madaxweyne ama in uu magacaabi doono beddel.
Nooca asalka ah: Katie Warren / Business Insider
Miyaad jeclayd maqaalkani? Sida Loo-shaqeeyaha Faransiiska ee Facebook!
Nolosha cajiibka ah ee Amancio Ortega, milkiilaha hantida ee Zara boqortooyadii
VIDEO: Tani waa waxa dhaca marka qof ku dhinto inta lagu jiro duulimaadka
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.businessinsider.fr/on-vous-presente-tadashi-yanai-lhomme-le-plus-riche-du-japon-et-fondateur-duniqlo/
Waxaa ugu fiican Laurent Gerra oo leh Céline Dion iyo Philippe Bouvard